China Shopping Cart DG1015 inogadzira uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:DG1015
Akavhurika saizi: 49x37x101CM
Basket size: 32x29x39.5CM
Saizi yakagadzirirwa: 37x21x94CM
Package: 8pcs pakatoni
Saizi yemabhokisi: 87x42x56CM
Iyi inhanho inokwira kutenga ngoro, inodhinda uye nehombodo, zvikorekedzo uye elastic tambo, tswanda inogona kutorwa kumusoro kubva pasi chengoro, inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzemamiriro. Iyo mubato inogona kushandiswa munzira mbiri dzakasiyana. Iyo yakareruka uye yakawanda inobatsira mukati mehupenyu hwako hwezuva nezuva.
Easy stair kukwira dhizaini: Vatatu vhiri yakagadzirirwa zvakananga kukwirira kukwira kukwirira. Carta inokwira kumusoro uye pasi matanho nyore. Mawiricheya akanaka pamatanda akadai sedope, huswa, masitepisi, cobblestones, kongiri, uye girafu. Ivhiri rapamberi vhiri rechisere, madhigirii mazana matanhatu zviri nyore kutenderera.
Collapsible frame utility yekutenga ngoro yekutenga: Chimiro chechitoro chekutenga chinogona kukoromoka sekufambisa zvinhu zvikuru uye zvinorema zvinhu nyore. Pasi pechikamu chekushandisa chinotenderedza zvakare kubvumira ngoro kuti itore nzvimbo shoma ichiri kuchengetwa.
Multiple inoshandisa kupeta kutenga ngoro yekutenga: Iyi yekushandisa motokari inogona kushandiswa kune isingagumi mamiriro ezvinhu sekutenga pamisika yevarimi, misika, zvitoro, kumisasa, zviitiko zvemitambo uye mall. Iyi trolley inogona kushandiswawo kutakura yekuwachira kuenda nekubva kune yekuwachira uye kumhanya inofamba ichitenderedza dhorobha. Inosanganisira imwe bungee tambo yezvakakura, zvinorema mitoro. uye inogona kutora 110lbs yehuremu kana uchidhonza zvinhu.
Yakasarudzika dhizaini inowira shooping ngoro: Collodion mubato ine nyaradzo inobata kuti ikubatsire kumusoro kumusoro uye hapana kukotama kana iwe uchikwira masitepisi. Iyo ngoro yekutenga iine 35L yakakura simba inogona kuiswa mvura, miriwo, mafuta anozivikanwa uye zvichingodaro. Kurema aluminium alloy bracket uye yakapetwa shaft kunoita kuti ngoro yekutenga ive yakanaka-uye isimbise mutoro. Mawiricheya akasungirirwa netambo haanyatso kudonha.
Yepfuura: Mahotera Trolley CC-S3S / CC-S3L
Inotevera: Shopping Cart DG1026 / DG1027
Tsika Dzakatengwa Ngoro
Yakawedzera Yakakura Shopping Cart
Foldable Shopping Cart Yairo Nemavhiri
Kuvhara Mota Matenga
Inotakurika Shopping Cart Nemavhiri
Shopping Cart Yevakuru
Shopping Cart Kuti Zvitima
Shopping Cart Ne Seat
Shopping Cart Ne Swivel Wheels
Shopping Inoshandiswa Carta Nemavhiri
Mbili Wheel Shopping Cart
Flat-panel ngoro HC350G / HC450G